RASMI: Bayern Munich oo ku dhawaaqday inay la soo wareegtay Ivan Perisic – Gool FM
RASMI: Bayern Munich oo ku dhawaaqday inay la soo wareegtay Ivan Perisic
(Yurub) 13 Agoosto 2019. Kooxda Bayern Munich ayaa si rasmi ah u shaacisay in Inter Milan ay kala soo wareegtay xiddiga reer Croatia ee Ivan Perisic.
Sida laga soo xigtay website-ka rasmiga ah ee kooxda Bayern Munich, Ivan Perisic ayaa kaga soo dhaqaaqay Inter Milan heshiis amah ee mudo hal xili ciyaareed ah, iyadoo shuruudaha ay qeyb ka yihiin in Bayern ay si toos ah u iibsan karto xili ciyaareedka soo socda.
Agaasimaha ciyaaraha ee kooxda Bayern Munich, Hasan Salihamidžić ayaa ayaa heshiiska kaddib sheegay:
“Ivan Perisic wuxuu nagu soo kordhin doonaa awood dheeri ah xil ciyaareedka cusub, sababtoo ah wuxuu heystaa waayo-aragnimo badan oo caalami ah, sidoo kale wuxuu ku xoogan yahay taatikada dhanka weerarka”.
“Waan hubaa in Ivan uu si dhakhso leh ula qabsn doono Bayern, maxaa yeelay wuxuu si fiican u yaqaana Horyaalka Jarmalka iyo tababare Nico Kovac”.
Intaas kaddib Ivan Perisic ayaa isna dhankiisa ka hadlay dareenkiisa kaddib imaatinkiisa kooxda Bayern Munich wuxuuna yiri:
“Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ku soo laabto dalka Jarmalka, waxaan u arkaa Bayern Munich inay tahay mid ka mid ah kooxaha ugu waa weyn Yurub”.
“Kaliya ma dooneynno inaan ku tartano horyaalka Bundesliga iyo DFB-Pokal, laakiin waxaan u baahanahay inaan ku guuleysano Champions League”.
“Harry Maguire wuxuu qaadi karaa wadadii Virgil van Dijk”
Arsenal oo dooneysa inay ka takhalusto AFAR ciyaartoy uu ku jiro Mohamed Elneny